သြစတြေးလျအလယ်တန်းကျောင်းသားများအကြားလိင်ဆက်ဆံမှုဆိုင်ရာအပြုအမူခြောက်ခု၏လူ ဦး ရေနှင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာဆက်နွယ်မှုများ (၂၀၁၅) - Your Brain On Porn
သြစတြေးလျအလယ်တန်းကျောင်းတွင်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအကြားခြောက်လ sexting အပြုအမူတွေ (2015) ၏လူဦးရေအချိုးအစားနှင့်အမူအကျင့်ဆက်စပ်မှု
လိင်ကျန်းမာရေး။ 2015 သြဂုတ် 17 ။ Doi: 10.1071 / SH15004 ။
ပက်ထရစ် K သည်, Heywood W က, Pitt MK, Mitchell ကတစ်.
နောက်ခံသမိုင်း: မြီးကောင်ပေါက်အတွက် sexting နှင့်အပြုအမူများ၏အလားအလာအနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှု၏နှုန်းထားများအကဲဖြတ်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်မှုရှိတယ်တိုးပွားလာခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအတွက် sexting ၏နှုန်းထားများနှင့်ဆက်စပ်မှုအကဲဖြတ်ရန်ခဲ့သည် နှစ်ပေါင်း 10, 11 နှင့် 12 အတွက်သြစတြေးလျကျောင်းသားကျောင်းသူများ။
နည်းလမ်းများ: လက်ရှိလေ့လာမှု (အဆိုပါပဉ္စမအမျိုးသားသြစတြေးလျက Secondary ကျောင်းသားများ၏စစ်တမ်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေး၏တစိတ်တပိုင်းနှင့် 2114 ကျောင်းသားများတုံ့ပြန်မှုအပေါ်အစီရင်ခံစာများခဲ့သည်811 အထီး, 1303 အမျိုးသမီး) ။ sexting ခြောက်လပစ္စည်းများကို အသုံးပြု. အကဲဖြတ်ခဲ့သည်: တစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိကျမ်းစာ၌လာသည်ကိုစာသားမက်ဆေ့ခ်ျကိုပေးပို့ခြင်း; တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစာသားမက်ဆေ့ခ်ျလက်ခံရရှိ; မိမိတို့ကိုယ်ကိုတစ်ဝတ်လစ်စလစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်နီးပါးဝတ်လစ်စလစ်ဓာတ်ပုံသို့မဟုတ်ဗီဒီယိုပို့; တစ်စုံတစ်ဦး၏တစ်ဦးဝတ်လစ်စလစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်နီးပါးဝတ်လစ်စလစ်ဓာတ်ပုံသို့မဟုတ်ဗီဒီယိုပို့; တစ်စုံတစ်ဦး၏တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဝတ်လစ်စလစ်သို့မဟုတ်နီးပါးဝတ်လစ်စလစ်ဓာတ်ပုံသို့မဟုတ်ဗီဒီယိုကိုလက်ခံရရှိ; နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းပြချက်များအတွက်ဆိုရှယ်မီဒီယာရဲ့ site ကိုသုံးနိုင်သည်။
ရလဒ်များ: ကျောင်းသားခန့်မှန်းခြေတဝက်လက်ခံရရှိခဲ့သော (54%, 1139 / 2097) သို့မဟုတ်စလှေတျတျော (43%, 904 / 2107) တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိကျမ်းစာ၌လာသည်ကိုစာသားမက်ဆေ့ခ်ျကိုခဲ့ရသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေကျောင်းသား 42% (880 / 2098) ကလက်ခံရရှိခဲ့ကြောင်း, လေးခုကျောင်းသားများကိုအတွက်တဦးတည်းသူတို့ကိုယ်သူတို့တစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ် (26%, 545 / 2102) ကိုစေလွှတ်ခဲ့ကြောင်းနှင့် 10 အတွက်တဦးတည်းကိုအခြားသူတစ်ဦးဦး၏တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ image ကိုစလှေတျတျောခဲ့သည် (9%, 180 / 2095) ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျောင်းသား 22% (454 / 2103) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းပြချက်များအတွက်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ sexting အများအပြားဆက်စပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။
ကောက်ချက်: sexting တစ်နှစ် 10, 11 နှင့် 12 သြစတြေးလျကျောင်းသားကျောင်းသူများ, အထူးသဖြင့်အသက်ကြီးကျောင်းသားများအကြား, လိင်တက်ကြွနေသောသူများနှင့်အပန်းဖြေတ္ထုများကိုသုံးပါသောသူတို့၏အမျိုးအဒီနမူနာထဲမှာအတော်လေးဘုံဖြစ်ခဲ့သည်။